Ngwaọrụ na-enye onye ọrụ ahụ nhọrọ nhazi maka ntanetị maka interface, na-amalite site na wijetị na ntọala dị mfe, na-ejedebe na ndị na-ese ihe ndị ọzọ. Otú ọ dị, ọ nwere ike isi ike ịmepụta akụkụ ụfọdụ nke imewe, dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbanwe koodu nke interface na ngwa na gam akporo.
Ịwụnye gam akporo na kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ
Nke a nkuzi na-akọwa otu esi agba ọsọ gam akporo na kọmpụta ma ọ bụ laptọọpụ, tinyekwa ya dịka usoro sistemụ (isi ma ọ bụ nke abụọ) ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa mkpa na mberede. Kedu ihe bara uru maka? Naanị maka nlele ma ọ bụ, dịka ọmụmaatụ, na akwụkwọ ochie netwọk ochie, ọ nwere ike ịrụ ọrụ ngwa ngwa, n'agbanyeghị adịghị ike nke ngwaike.
Esi emeghe faịlụ djvu?
Ụdị DJVU kachasị ewu ewu n'ihi oke mkparịta ụka nke akwụkwọ (ma ọ bụ mgbe ụfọdụ, mkparịta ụka dị ọtụtụ karịa elu na pdf). Otú ọ dị, ọtụtụ ndị nwere nsogbu mgbe ha na-arụ ọrụ na faịlụ na usoro a. Isi nsogbu ndị a bụ otu esi emeghe djvu. Iji mepee pdf na PC na ngwaọrụ mkpanaka, enwere ihe omume ndị a ma ama dị ka Adobe Acrobat Reader ma ọ bụ Foxit Reader.
Esi gbanyụọ kaadị vidiyo ahụ zuru ezu
Ntuziaka dị n'okpuru na-akọwa ọtụtụ ụzọ ị ga-esi gbanyụọ vidio vidio gbakwunyere na laptọọpụ ma ọ bụ kọmpụta ma jide n'aka na ọ bụ naanị ihe dị iche iche dị iche iche (vidiyo) dị iche iche. Kedu ihe ọ ga-achọ maka? N'eziokwu, enweghi m ike ịhụ mkpa doro anya iji gbanyụọ vidio ahụ (nke dịka iwu, kọmputa na-eji ihe ngosi dị iche iche ma ọ bụrụ na ị jikọọ nyochaa na vidiyo vidiyo dị iche na laptọọpụ na-agbanwe ihe nkwụnye ọkụ dịka ọ dị mkpa), mana e nwere ọnọdụ mgbe anaghị amalite mgbe enyere ndị na-ese foto dị iche iche na ndị yiri ya.
Na mgbakwunye na nsụgharị nke Skype maka laptọọpụ na laptọọpụ, enwerekwa ngwa Skype ngwa ngwa maka ngwaọrụ mkpanaka. Isiokwu a na-elekwasị anya na Skype maka smartphones na mbadamba na-arụ ọrụ usoro Google arụmọrụ. Esi tinye Skype na ekwentị ekwentị gị Iji wụnye ngwa ahụ, gaa Google Play Market, pịa akara ngosi ma banye "Skype".
Chọta na wepu malware n'ime Google Chrome
Ọ bụghị onye ọ bụla maara, ma Google Chrome nwere ọrụ nke ya nwere ike ịchọta ma wepụ malware. Na mbụ, ngwá ọrụ a dị maka nbudata dị ka usoro dị iche - Chrome Cleanup Tool (ma ọ bụ Nwepu Ngwá Ọrụ Software), ma ugbu a, ọ ghọwo akụkụ dị mkpa nke ihe nchọgharị ahụ. Na nyochaa a, otu esi agba ọsọ nyocha site na iji nchịkọta Google Chrome rụọ ọrụ na iwepụ ihe omume ọjọọ, yana obere oge ma eleghị anya ọ bụghị kpamkpam ihe gbasara ngwá ọrụ ahụ.
Office Microsoft free - ntanetị nke ọrụ ụlọ ọrụ
Ngwa ngwa Microsoft Office bụ mbipụta kpamkpam nke usoro ihe omume ọ bụla, gụnyere Microsoft Word, Excel na PowerPoint (nke a abụghị ndepụta zuru ezu, kama ọ bụ naanị ihe ndị ọrụ na-achọkarị). Lee kwa: Office kacha mma maka Windows. Achọrọ m ịzụta Office na nke ọ bụla n'ime nhọrọ ya, ma ọ bụ chọọ ebe ị ga-ebudata ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ, ma ọ bụ m nwere ike ijikọta na sistemụ weebụ?
Esi gbanwee ụda nkwupute Ịntanetị maka ngwa dị iche iche
Site na ndabara, nkwupụta si na ngwa ngwa Android dị iche iche na-abịa na otu ndabara ụda. Ihe ndị ọzọ bụ ihe ndị na-adịghị na ya ebe ndị mmepe setịpụrụ onwe ha ọkwa ụda. Nke a anaghị adaba mgbe nile, na ike ịmepụta vibera site na nke a, instagram, mail ma ọ bụ SMS, nwere ike ịba uru.
Ngwaọrụ anaghị akwado Google na Ụlọ Ahịa Play na ngwa ndị ọzọ na gam akporo - esi edozi
Ihe ọjọọ a na-ekwu n'elu "Ngwaọrụ Google adịghị akwado", a na-ahụkarị na Ụlọ Ahịa Play abụghị ihe ọhụrụ, mana ndị nwe gam akporo ekwentị na mbadamba nkume amalitere izute ya ọtụtụ mgbe kemgbe March 2018, n'ihi na Google agbanweela ihe dị na iwu ya. Ntuziaka a ga-akọwa n'ụzọ zuru ezu esi edozie njehie ahụ. Google anaghị akwado ya ma nọgide na-eji Ụlọ Ahịa Play na ọrụ ndị ọzọ Google (Maps, Gmail na ndị ọzọ), yana nkenke banyere ihe kpatara njehie ahụ.
Torrent - ihe atụ nke iji
N'okwu abụọ gara aga, edere m banyere ihe iyi bụ na otu esi achọ iyi. Oge a anyị ga-atụle otu ihe atụ nke iji netwọk faịlụ na-achọ ma budata faịlụ dị mkpa na kọmputa. Ibudata ma wụnye onye na-ekpo ọkụ na mmiri. N'uche m, ndị kasị mma ahịa ahịa bụ utorrent n'efu.
Vkontakte adịghị etinye ihe ị ga-eme?
Vkontakte anaghị emeghe - esi eme? A na-egbochi akaụntụ VKontakte na a ga-ehichapụ ya. Gịnị ka m kwesịrị ime ma ọ bụrụ na anaghị m abanye na VKontakte, ụmụ klas gị na ajụjụ ndị yiri ya - a na - ezutekarị ya na ọkwa dị iche iche ma ọ bụ ọrụ nzaghachi. Onye ọzọ ga - abụ: ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị nwere ọkwa dịgasị iche iche nke kọmputa na - ejikarị na netwọk mmekọrịta ma ọ bụrụ na, kama nke ihu na - aga n'ihu, ha na - ahụ ozi na - ezigara na akaụntụ ha ma ọ bụ chọtara izipu ozi gbasara spam ka ajụjụ ghara ịbụ ehichapụ, mgbe mgbe amaghị ihe ị ga-eme.
Esi arụ ọrụ egwuregwu ISO
N'ezie, isiokwu a emetụlarịrị n'isiokwu bụ "Otu esi emepe faịlụ ISO", Otú ọ dị, nyere ọtụtụ ndị na-achọ azịza nye ajụjụ banyere iji wụnye egwuregwu na usoro ISO site na iji mkpụrụokwu ndị dị otú ahụ, echere m na ọ bụghị ihe karịrị ide ede otu ntụziaka. Tụkwasị na nke ahụ, ọ ga-eme nnọọ mkpụmkpụ. Kedu ihe bụ ISO na ihe egwuregwu dị na usoro a? Faịlụ ISO bụ faịlụ faịlụ CD, ọ bụrụ na ibudatara egwuregwu na usoro ISO, kwuo, site na iyi, ọ pụtara na ibudatara otu CD na kọmputa gị na-egwu na otu faịlụ (ọ bụ ezie na oyiyi ahụ nwere ike ịnwe ọtụtụ faịlụ).
Kedu ihe WiFi
Wi-Fi (Wi-Fi a na-akpọ) bụ ọkọlọtọ dị elu maka ikuku data na netwọk ikuku. Ka ọ dị ugbu a, ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ngwaọrụ mkpanaka, dị ka smartphones, ekwentị mkpanaka, laptọọpụ, kọmputa mbadamba, yana igwefoto, ndị nbipute, TV ndị oge a, yana ọtụtụ ngwaọrụ ndị ọzọ nwere WiFi wireless communication modules.
Esi lelee saịtị maka nje
Ọ bụghị ihe nzuzo na ọ bụghị saịtị niile na Intanet dị mma. Ọzọkwa, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ihe nchọgharị niile a na-eme taa na-egbochi saịtị ndị dị ize ndụ, ma ọ bụghị mgbe niile. Otú ọ dị, ọ ga-ekwe omume iji aka gị chọpụta saịtị ahụ maka nje virus, koodu ọjọọ na egwu egwu ndị ọzọ na ịntanetị na n'ụzọ ndị ọzọ iji hụ na ọ dị mma.
Kedu esi emeghe Archive online
Na obere nlezianya a - ụfọdụ n'ime ọrụ ndị kachasị mma m na-ahụ maka ịntanetị na-enweghị ike ịchọta, yana gbasara ihe kpatara ya na n'ọnọdụ ndị a ka ozi a nwere ike ịbara gị uru. Enweghịdị m iche banyere faịlụ archive na-enweghị ike ịntanetị ruo mgbe m ga-emepe faịlụ RAR na Chromebook, mgbe m mechara ihe a, echetara m na onye m maara na-ezitere m akwụkwọ mpempe akwụkwọ site n'ọrụ maka mwepu, n'ihi na ọ gaghị ekwe omume ịwụnye na kọmputa m mmemme gị.
Esi esi rụọ ọrụ na Opera
Akpọrọ m otu enyi, jụọ m: esi ebufe ibe edokwubara site na Opera, iji nyefee na ihe nchọgharị ọzọ. Ana m aza na ọ bara uru na-achọ na njikwa maka ibe edokọbara ma ọ bụ na ntọala ahụ mbupụ na ọrụ HTML ma wee bubata faịlụ dapụtara na Chrome, Mozilla Firefox ma ọ bụ ebe ọ bụla ọ dị mkpa - n'ebe niile ọrụ dị otú ahụ.
Esi emeghe faịlụ
Ugboro ugboro na Intanet m ga-enweta ajụjụ banyere otu esi emeghe otu faịlụ. N'ezie, onye na-enweta kọmputa n'oge mbụ nwere ike ọ gaghị edo anya ụdị egwuregwu ọ dị na mdf ma ọ bụ iso, ma ọ bụ otu esi emepe faịlụ swf. M ga-anwa ịnakọta ụdị faịlụ niile nke ajụjụ dị otú a na-esitekarị, kọwaa nzube ha na ihe omume ha nwere ike imeghe.
Ọtụtụ ndị ọrụ, mgbe ị na - agbalị iwepụ antivirus - Kaspersky, Avast, Nod 32 ma ọ bụ, dịka ọmụmaatụ, McAfee, nke a na - edozi na ọtụtụ laptọọpụ mgbe a zụrụ ya, nwere nsogbu ndị a ma ọ bụ nsogbu ndị ọzọ, nke nke otu - ọ gaghị ekwe omume iwepu antivirus. N'isiokwu a anyị ga-elele anya iji wepu usoro antivirus, nsogbu ndị ị nwere ike izute na otu esi edozi nsogbu ndị a.
Nchịkọta faịlụ nke faịlụ maka nje na Hybrid Analysis
Mgbe ịbịakwute ntanetị nke faịlụ na njikọta nje virus, ọrụ VirusTotal na-echetakarị, mana enwere ihe ana-atụle qualitative, ụfọdụ n'ime ha kwesịrị ilebara anya. Otu n'ime ọrụ ndị a bụ Hybrid Analysis, nke na-enye gị ohere ọ bụghị naanị iṅomi faịlụ maka nje, ma na-enyekwa ngwaọrụ ndị ọzọ iji nyochaa mmemme ọjọọ na nke dị ize ndụ.
Otu esi ekesa Internet site na ekwentị Android site na Wi-Fi, site na Bluetooth na USB
Ọnọdụ modem n'ime igwe nke oge a na-enye gị ohere ịkekọrịta "njikọ Ịntanetị na ngwaọrụ ndị ọzọ na-eji ma njikọ ikuku na njikọ USB. Ya mere, ọ bụrụ na ịmepụta izugbe n'ozuzu ya na Ịntanetị na ekwentị gị, ị nwere ike ọ gaghị adị mkpa ịzụta modem USB 3G / 4G iche iche iji nweta Internet na ụlọ site na laptọọpụ ma ọ bụ mbadamba nke na-akwado njikọ Wi-Fi.